Izigulane ezingaphezu komzimba emzimbeni womuntu zidlala indima ebalulekile, ngoba zibophezele ekukhiqizeni izinhlobo eziningana zamahomoni. Isifo sika-Addison siyisimiso se-endocrine system, ukubonakaliswa okuyinhloko okungasebenzi kahle. Kubonakala kungavamile, kodwa kuyingozi kakhulu. Phakathi nenkathi yesifo, zombili izigulane eziyingozi ziyathinteka. Isizathu esivame kakhulu sesifo yisimiso sokuzimela. Kule nkinga, izigulane eziyinkimbinkimbi ziyaqhubeka nezinguquko zomzimba, ngenxa yokuthi zinciphisa.
Ngaphezu kwalokho, izimbangela zesifo zingaba izifo ze- venereal (i-syphilis), isifo sofuba esiyingozi, i-AIDS, i-amyloidosis kanye nezilonda zomdlavuza. Isifo sika-Addison sína ngokwanele futhi senze izimpawu. Okokuqala, isiguli sinomuzwa obuthakathaka emisipha, njengoba kuhlaselwa ukucindezela kwegazi. Lesi simo sihambisana nokucindezeleka nokulahlekelwa isisindo esinzima, okuyinto enzima ukuyeka.
Ngenye indlela, lesi sifo esibizwa ngokuthi "isifo sobhedu", njengoba kukhona ukuguqulwa kwesikhumba sokushisa isikhumba: kuqala ukunyamala futhi kubonakale ngokucacile ngokumelene nesizinda sezindawo ezinomthunzi ovamile. Ukudla kubantu abagulayo kubonakala kungenakulinganiswa, ngakho baqala ukusebenzisa usawoti ngobuningi. Uma ukulimala okunamandla kubonakala ezinganeni, khona-ke ukwehla kwezinga le-glucose kungatholakala egazini labo.
Izimpawu zesifo sofuba kubesifazane ziboniswa ukuphela okuphelele noma okuncane kokuphuma kwesikhatsi. Uma lesi sifo sithuthuka kakhulu, kungase kube nokuphulwa kwenqubo yokugwinya, kanye nokuxubana, ukuhlelwa kwemithi.
Uma izimpawu zibonakaliswa ngokuzumayo, khona-ke lo muntu usenkingeni: ukucindezeleka kwehla ngendlela ephawulekayo futhi ebukhali, ubuhlungu obunzima bokusika emlonyeni nasemilenzeni bubonakala. Isiguli siqala ukuhlanza okuqinile nokuhuda, ngezinye izikhathi angakwazi ukulahlekelwa. Uma ungabizi i-ambulensi ngesikhathi, isiguli singase sife.
Ngaphandle kwezimpawu ezibonakalayo, ukuhlolwa kwegazi kwegazi kuyenziwa ukuqinisekisa ukuxilongwa.
Isifo sika-Addison sidinga ukwelashwa okusheshayo, okuhlanganisa ukwelashwa kwe-hormone. Inhloso yezidakamizwa incike ekutheni i-hormone ayanele ngokwanele emzimbeni. Udokotela ubonisa ikhadi lokungenisa izidakamizwa. Ngaphandle kwalokho ungayishintsha wena noma ukwandise umthamo. Futhi kufanele uhambisane nokudla okuthile.
Ngesikhathi sezinkinga, ukwelashwa okuphawulekayo nokwethulwa kwezidakamizwa ze-intramuscular and intravenous kwenziwa. Uma yonke imisebenzi yenziwa ngesikhathi, khona-ke inkinga ihamba ngokushesha. Lesi sifo singabangela ukubola kwegazi emasontweni adrenal. Uma inkulu ngokwanele, ingabangela ukufa.
Isifo sika-Addison asiphilisi ngokuphelele, kodwa, ngosizo lwezokwelapha okufanelekayo impilo yesiguli ingafakwa kakhulu futhi iqhutshwe. Nakuba isiguli kuyodingeka sishintshe imikhuba yabo nendlela yokuphila.
Izimpawu zokunyuka kwengcindezi yegazi nokucindezela okungahambi kahle. Izimpawu nezimbangela
Ngenxa yalokho okukhona i-thrush?
Kungani kukhona igazi ngesikhathi socansi
Izindawo ezibomvu ngaphansi kwezimpondo: i-mycosis engaphandle kanye nezindlela zokwelapha
Okushefa Gel: izinzuzo nokusebenzisa imithetho
Ngempumelelo kangakanani antidepressant? Izibuyekezo wabo
Lokushisa High, emalanga la -4 ingane ukuthi yini okufanele uyenze?
Pine - isitshalo zokwelapha
Kangakanani ekwelapheni flatfoot e abadala
Irina Melnikova - Biography nemisebenzi